04/07/2018 - Page 2 sur 4 -
Fiaraha-miasa : Hanampy amin’ny fiarovana ireo vakoka ry zareo sinoa
Matotra ny fifandraisana. Nitsidika ara-pomba fifanajana ny minisitry ny Kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka, Johasy Eléonore ny masoivohon’ny Sinoa eto Madagasikara. Nisongadina tamin’izany fa hanampy amin’ny fiarovana ireo …Tohiny
Maorisy : Héroïne 4,2 kg nandalo teto Madagasikara tra-tehaka
Zava-mahadomelina mahery vaika milanja 4,2 kilao ary mitentina 63 tapitrisa Rs no sarona tao amin’ny seranan-tsambo iray ao amin’ny nosy Maorisy afakomaly. Araka ny voalazan’ny eo anivon’ny lexpress.mu, dia nasitrika tao anatina boaty misy ny …Tohiny
Nizar Pirbhay : Votsotra teo am-pelatanan’ireo mpaka an-keriny
Araka ny fampitam-baovao ofisialy avy eo anivon’ny fianakaviamben’ny karana mizaka ny zom-pirenena frantsay eto Madagasikara na ny Cfoim, tamin’ny alalan’ny vovonan’izy ireo tao amin’ny tambazotran-tserasera “facebook”, dia navotsotr’ireo mpaka an-keriny tany Toamasina omaly tamin’ny 06 …Tohiny
Fanomanana fifidianana : Hampahafantarin’ny CENI anio ny kipitsopitsony
Mbola lavitr’ezaka ny lalan’ny fanomanana ny fifidianana na dia efa fantatry ny besinimaro aza ny datin’ny fihodinana voalohany sy ny faharoa, saingy eo amin’ny fanatontosana no mbola ilaina hazakazaka arahin-tosika. Manoloana izany indrindra, mba hampazava …Tohiny
Fanatsarana ny voka-bary : Ho avy alohan’ny faran’ny taona ny traktera miisa 1 000
Mialohan’ny faran’ity taona ity no hahatongavan’ireo traktera miisa 1 000 ary hiparitaka manerana ny Sampan-draharahan’ny Fambolena eto amintsika. Nandritra ny fihaonan’ny delegasiona Indianina tamin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, omaly teny Iavoloha no nahalalana izany. Ny minisitry ny ...Tohiny
Tobin’ny miaramila RM 1 : Nahazo fampitaovana ara-pahasalamana avy amin’ny vadin’ny Filoha